Izindaba - Ukukhetha Izinto Ezinhle Kakhulu Nezindlela Zokupakisha Imishini
Lapho ufuna imishini yokupakisha, okungcono kakhulu okuzokwenza. Imishini yebhizinisi lakho ingaphezu kokutshalwa kwemali kokuqala. Kungenza noma kwephule ikusasa lenkampani yakho. Ngakho-ke ufuna ukukhetha imishini yokupakisha eyakhiwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Noma ngabe unentshisekelo yokuthuthukisa imishini ephelelwe yisikhathi noma ukukhulisa ulayini wokukhiqiza okhona, sebenzisa lo mhlahlandlela ukukusiza wenze ukukhetha okulungile kwimishini. Inkampani yeGAOGE ingakunikeza ngezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme ngokwezidingo zakho futhi iqinisekise ikhwalithi yomshini
Insimbi engagqwali ijwayele ukusetshenziselwa ukwenza izinto zomshini, kufaka phakathi ifreyimu, izindawo zokuxhumana zomkhiqizo, futhi ezimweni zemishini yenhlanzeko, yonke into. Le nto ikhethelwa ukuqina kwayo namandla. Insimbi engagqwali nayo izuzisa imishini yokupakisha ngokukhuphuka kwayo kokugqwala- nokumelana namachibi. Ngamanye amagama, insimbi engagqwali ayigqwali kalula njengezinye izinsimbi. Imelana nokuhlanzwa kwengcindezi ephezulu, uketshezi, uthuli, umswakama nezinye izinto ezethula umswakama. Kungenxa yazo zonke izizathu ezedlule ukuthi lapho ukhetha okokwakhiwa kwemishini yokwakha, insimbi engagqwali iyona khetho oluphezulu ezimweni eziningi.
I-Aluminium eyenziwe nge-Anodized
Uma kukhulunywa ngokudonsa izigaxa zebhande ezisetshenziswa emishini yokupakisha, kunensimbi eyodwa evelele esixukwini. I-Aluminium njengensimbi yaziswa ngesisindo sayo esincane namandla amakhulu. Ngokwengeziwe, iyinsimbi engasebenzisi insimbi esetshenziswa kakhulu. Uma ufuna insimbi eyi-eco-friendly, ngenxa yobuningi bayo kuqweqwe lomhlaba, i-aluminium mancane amathuba okuba imbe ngokweqile.
Lapho i-aluminium yenzelwe izingxenye zemishini yokupakisha, amandla ayo andiswa kakhulu. Ngokwe-Aluminium Anodizers Council, “inhloso yokugcotshwa kwe-anodizing ukwakha ungqimba lwe-aluminium oxide ezovikela i-aluminium engaphansi kwayo. Isendlalelo se-aluminium oxide sinokumelana nokugqwala nokulimaza okuphezulu kakhulu kune-aluminium. ” Ngalesi sizathu, i-aluminium ene-anodized ilungile uma isetshenziselwa ukudonsa amabhande emapulangwe engxenyeni yemishini yokupakisha. Ngokuphelele, ama-pulleys enziwe nge-aluminium ene-anodized azokwehla ngesilinganiso esihamba kancane kakhulu kunama-pulleys enziwe ngezinye izinto ezifana nepulasitiki.
Ukwenziwa lula Kwezingxenye
Enye yezindlela ezinhle kakhulu zokuqinisekisa ukuthi imishini yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso izogcina ngokwenza lula izingxenye zayo nokuqinisekisa ukuthi ziyimodemu futhi azihambisani nokuphathelene. Ngokuphikisana nenkolelo evamile kwesinye isikhathi, uma kukhulunywa ngemishini yokupakisha, kulula ukuthi kube ngcono ngaso sonke isikhathi. Njengoba izingxenye eziningi nobunkimbinkimbi bakhelwe emshinini, lokhu kukhulisa amathuba okuthi izingqinamba ezincane zikhuliswe lapho kuphakama izinkinga. Ngokwengeziwe, ngokukhetha izinto ezinamandla njenge-aluminium nensimbi yezingxenye, izingxenye zemishini zizodinga ukufaka esikhundleni kaningi.
Manje njengoba wazi ukuthi yini okufanele uyibheke kumishini yokupakisha, usukulungele ukuqala ukuthenga into yakho elandelayo yemishini. Dlulisa amehlo kuwebhusayithi yethu ukuze uhlole ukuthi yini okufanele sinikele ngayo ngokwemishini yokupakisha eyenziwe ngokwezifiso, elula, futhi eqinile. Xhumana nathi ukusetha ukubonisana noma ukuthola okwengeziwe ngezinto ezinhle kakhulu ongazifuna kumishini yokupakisha.